Maitiro ekuomesa pendrive kuburikidza neiyo Linux terminal | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Sisitimu Yekutonga, GNU/Linux
Kunyangwe zvave kuve nyore kuve neyakajeka graphical nharaunda iyo isingatore zviwanikwa uye iyo inobatsira kushanda kure kana pamakomputa ane mashoma zviwanikwa. Kunyange zvakadaro, zvinogara zvichikurudzirwa kuziva kubata kweiyo terminal uye maitiro ekuita kumwe kushanda kuburikidza neichi chakakosha Gnu / Linux chishandiso.
Matanho pamwe nemaitiro acho anoenderana nechero kugoverwa kweGnu / Linux, tinogona kuishandisa muUbuntu terminal iyo inoshanda muWindows 10, ruzivo ruchabatsira kune vashandisi vevashandi.
Kero yependrive ndeimwe yemapoinzi akakosha kana uchifomesa pendrive
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva uye kuziva hutungamiriri iyo iyo Gnu / Linux system yakapa kune iyo pendrive. Nezve izvo, isu tinongofanirwa kunyora iyo df yekuraira mune iyo terminal uye icharatidza kuti ndeapi mauniti akabatanidzwa mune ino sisitimu. Unyengeri: kazhinji Gnu / Linux system inogara ichipa mavara "sdaX", saka kana isu tangova nechete pendrive yakabatana, rinenge riri zita rakaenzana kana rakaenzana.
Kana tangowana iyo pendrive, isu tinofanirwa kuibvisa kubva kuhurongwa kuitira kuti igone kuumbwa. Mune ino kesi isu tinofanirwa kunyora zvinotevera mune terminal:
Izvozvi sezvo iyo pendrive yabviswa, isu tinofanirwa kunyora zvinotevera mune terminal.
Musiyano -F 32 unotaurira iyo system iyo fomati inofanirwa kuitwa neFat32 faira system. Kana tikashandisa musiyano -n isu tinofanirwa kuratidza zita reyuniti, zita rinozoonekwa pese patinobatanidza iyo pendrive kune komputa yedu. Iri zita rinogona kunge riri "pen-drive-zita" kana chero rimwe zita.
Kana iko kuita kwapera, isu tinongofanirwa kukwirisa iyo pendrive uye isu tichaona kuti diski haina chero dhata, chimwe chinhu chinowanzoitika kana isu tichiomesa dhiraivha kana pendrive. Pakupedzisira, simbisa kuti isu tinofanirwa kuziva zvakanaka kero yependrive, nekuti kana tikavhiringidzika tikaisa imwe kero, senge HD kero, tinogona kupererwa nehurongwa hwekushandisa. Zvichengete mupfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuomesa pendrive kuburikidza neiyo Linux terminal
weird kuti ndeye sdaX, ine njodzi, sda iri rakaomarara diski, kunze kwekunge isina
Ini ndinofunga iro muenzaniso ndere diabolical / dev / sda1 inowanzo kuve system partition, zvirinani kuisa / dev / sdX1
Kwete, zvirinani usati waita sudo fdisk -l kuziva kuti ndeipi diski iyo USB, chenjera ne / sda inova iyo hd yeiyo system. Zviri nani exfat pane fat32, inoverengwawo neWindows uye inokurumidza. Kwaziso.
Zvirinani ext2 kana f2fs pane exFAT kana FAT32 kana uchizoshanda nependrive zvakanyanya muGNU / Linux; kunyange IFS iriko zvakare yekugona kushandisa ext * uye f2fs muWindows uye pamwe zvakare mune macOS.
mkfs.vfat: haigone kuvhura / dev / sdb1: Verenga-chete faira system. Kwaziso ndinogona kuita iyo pendrive haina fomati ini ndakaedza nzira dzakawanda dzese kubva ku linux. Ini ndichiri kushandisa windows maturusi uye ini handidi. Asi iyi pendrive isingagone kumisikidzwa, ndinogona kuverenga rese ruzivo irinayo, asi haitenderi kudzima chero, haitenderi kuchengetedza chero chinhu mukati mayo uye ini handigone kuimisa, ini ndatoedza nemvumo ye chmod, Ndakaedza kuimisa ne gparted.
Zviri nyore kushandisa memory memoryer iyo inouya mune XD zvishongedzo
Pindura kuna asda
Eye Hack akadaro
Ini ndinodzima windows mune iyo partition yandaive nayo, zvirinani kungwarira nemacode aya, rombo rakanaka yanga isina chinhu chakakosha.
Pindura kune eyehack